Sei Kuona kwe 3D + CPQ Kutyaira Kutengesa | Martech Zone
Muvhuro, October 7, 2019 Muvhuro, October 7, 2019 Douglas Karr
Bandwidth uye yekupa simba iri kugonesa zvimwe zvinoshamisa zvinoshamisa pamhepo. Kana iwe wafunga kushongedza kicheni chako, semuenzaniso, iwe unowana mamwe makuru mapuratifomu online uko iwe kwaunokwana michina yemagetsi uye makabati ekugadzira iyo yakanaka nzvimbo. Munguva yakapfuura, chirevo ichi chaigona kutora mazuva akati wandei, pamwe kana mavhiki kana iwe uchidhonza muinjiniya uye dhizaini zvikwata kuti ugadzire chaiyo tsika chigadzirwa icho chaicho mutengi anoda. Kutora nguva yakareba zvakadaro kunounza murombo rwendo rwevatengi uye kunopa mutengi nguva yekusiya yako mhinduro.
Chii chinonzi CPQ?
CPQ inomirira kugadzirisa, mutengo, mutengo. CPQ inobatsira masangano kudzikisira kusakwana mune avo maitiro ekutengesa nekuita kuti zvive nyore kugadzirisa zvigadzirwa zvigadzirwa nemitengo. Iyi software inoshandisa zvakagara zvatemerwa chigadzirwa uye mitengo yemitengo kupa mutengo kune vatengi mukati memaminetsi, izvo zvinogona kuve chidimbu chenguva inotora echinyakare zvikwata zvekutengesa kuzviita.
Kris Goldhair, Strategic Akaunti Director, KBMax
Iko kugona kumisikidza chigadzirwa kwakanakisa… asi pasina kupihwa, pane mukaha mune ruzivo rwevashandisi uye mukana wemutengi wekushandura ipapo. 3d kuona zvakare kunoderedza mukana wekugadziriswa kwekukanganisa.
Companies like KBMax varikugadzira mutsauko… kugadzira chikuva chevagadziri uye ecommerce saiti kugonesa 3d visualization yekupedzisira chigadzirwa. KBMax inopa yakasanganiswa software mhinduro kuita kuti kutengesa zvigadzirwa zvakaomarara zvive nyore, kuti ugone kupa vatengi vako ruzivo rusingaenzaniswi rwekutenga, kudzikisira nguva yekupindura kusvika pamaminetsi panzvimbo pemavhiki, uye kukwidza yako mitengo yekutendeuka. Heino pfupiso.
Maturusi ekuratidzira e3D anogona kuve nekuzvipira kunorema pane IT masevhisi kana kambani yako ikafunga kuyedza kuita tsika kuvaka mhinduro. Izvi ndizvo zvinoitwa nevatengi veKMMax Tuff Yakateurwa akaita… asi pakupedzisira kambani haina kugona kuzvichengeta. Kana kugona kubatanidza chishandiso kune ayo mamwe masisitimu ebhizinesi. Iine KBMax, Tuff Shed yakawanikwa izere-yakasanganiswa 3D kuona sechikamu cheplatform yavo yeCPQ.
Zvichienzaniswa pasina kuona, 2D uye 3D kuona kunogona kuwedzera zvakanyanya mitengo yekutendeuka nekuti inobatsira vatengi kuona uye kunzwisisa zvirinani chigadzirwa.
59 muzana yeecommerce vatengi tenda mifananidzo ndiyo inonyanya kukosha sosi kana uchifunga kuita yekutenga pamhepo. Nekuchinjisa yavo yekare gadziriso yemubatanidzwa, 3D CPQ mhinduro, Tuff Shed yakawana 168% yekuwedzera mukutengesa.
Kuona kwe 3D kunobatsirawo parutivi rwekugadzira nekuti uri kupfuudza pasi kuona kwechigadzirwa. Kana vasvika kuchitoro pasi, vagadziri havasisina chete runyorwa rwezvikamu, ivo vane mufananidzo weizvo mutengi anoda. Pamusoro pe3D visualization, KBMax inogona kuburitsa chaiyo yeinjiniya-nhanho madhirowa muCAD masystem senge Solidworks, iyo ine simba chaizvo. Naizvozvi, iwe urikutora maitiro aigona kutora mazuva akati wandei uye uchizvigadzirisa zvachose uchinyanya kudzikamisa zvikanganiso zvichipinda nesystem.
CPQ, 3D Kuona uye B2B eCommerce
Kuona kwe 3D uye CPQ haisi mhinduro yeB2C chete, vatengi vazhinji veKMMax vari kushandisa yavo software kubatsira vese vekunze kana vevatengesi zvikwata. Izvi zviri kuitika mune ese akasiyana maindasitiri kubva kune biomedical kusvika kune yekuvaka mwenje uko kuona kuri kwakakosha kune yekutengesa maitiro.
Na 2020, B2B eCommerce yekutengesa inodarika yekutengesa B2C uye inosvika $ 6.6 trillion.
Iyo Nyika yeB2B E-Commerce mu2019
Vatengesi vanogona sei kuona kuti vatengi vavo vanogona kugadzikana kushandisa zviuru pachigadzirwa chavasati vamboona? Makambani anoda kupa vangangove vatengi ruzivo rwe multimedia. Vatengi vanoda ruzivo rwekumashure rwavanogona kuwana kana zvasvika pakutenga kukuru. Kubva pamifananidzo nemavhidhiyo kuti utenge wongororo, vangangove vatengi vari kutsvaga webhu kuti uwane ruzivo rwemashure usati wabata mutengesi.
KBMax inogona kushandisa zvekare mafaera ako emufananidzo sepokutangira paunenge uchiita 3d visualization mune yako CPQ maitiro. Kana iwe uine zvese izvi mifananidzo yezvigadzirwa zvako kubva kune yako timu yeinjiniya, vanogona kugaya iwo muinjini yedu voishandisa zvakare kuti usatange kubva pakutanga uye haufanire kukodha zvese. Izvi zvinogadzira chiitiko chakasiyana chaicho kubva kare kwawaifanira kuvaka pane nhunzi.
KBMax zvakare ine Salesforce-yakasanganiswa CPQ mhinduro!
Ongorora KBMax's Mhinduro
Tags: 3d3d kupa3d kuonaconfigurecpqkbmaxtuff shed